Wararka Maanta: Jimco, May 11, 2012-Kooxo hubeysan oo laba qof ku toogtay baratmaha Magaalada Boosaaso ee Maamul Goboleedka Puntland
Goobjoogayaal ayaa sheegay in labada qof ee la dilay ay ehel ahaayeen, ayna toogteen labada dhallinyaro ah oo bastoolado ku hubeysan, iyadoo wararka qaar ay sheegayaan in labada ay ahaayeen saraakiil ka tirsan maamulka Puntland.
"Dilku wuxuu ka dhacay bartamaha Boosaaso, goobtana waxaa soo gaaray ciidamo ka tirsan maamulka, kuwaasoo baaritaan sameeyay balse ma jirto cid ay u qabteen dilkaas," ayuu yiri goobjooge ku sugan Boosaaso.
Maamulka Puntland ayaan ka hadlin dilka loo geystay labadan ruux oo lagu sheegay inay ahaayeen saraakiil maamulkooda ka tirsan, iyadoo wararka qaarkood ay xuseen inay kasoo jeedeen deegaannada Galgala.
Deegaanka Galgala ayaa waxaa sannadkii 2010 ku dagaalamay xoogag taabacsan Sheekh Maxamed Siciid Atam oo dhawaan ku biiray Al-shabaab iyo cidamada maamulka Puntland.
Toogashada labadan ruux ayaa waxay kusoo beegmaysaa iyadoo maamulka Puntland uu dhawaan sheegay inay xasiliyeen ammaanka Puntland, sidoo kalena ay jireen hanjabaadyo kasoo baxaya xoogagga buuraleyda Galgala.